निर्मला पन्त हत्याकाण्डले सम्झायो नमिता सुनिता हत्याकाण्डको कहाली « News24 : Premium News Channel
निर्मला पन्त हत्याकाण्डले सम्झायो नमिता सुनिता हत्याकाण्डको कहाली
काठमाडौं, २९ भदौ । न्यायको याचना गर्दै निर्मला पन्तका बा–आमा काठमाडौंमा दौडधुप गरिरहेका छन् । प्रहरी–प्रशासन नै हत्यारा खोज्नभन्दा प्रमाण मेटाउन उद्दत भएपछि यज्ञराज र दुर्गा दम्पक्तिले न्याय पाउनेमा अझै शंका छ ।
देख्दा छर्लङ भएपनि दोषी पत्ता नलागेको निर्मला हत्या प्रकरणको रहस्य बाहिरिने हो वा पञ्चायतको उत्तरार्धतिर पोखरामा भएको नमिता–सुनिता हत्याकाण्ड जस्तै रहस्यमै हराउने हो कि भन्ने चिन्ता चुलिन थालेको छ ।
बढ्दै, पढ्दै गरेकी छोरीसँग कुन चाहीँ बा–आमाको सपना गाँसिएको हुन्न र ! त्यस्तै अव्यक्त सपनाको हुटहुटी संधैका लागि अन्त्य भयो– यज्ञराज र दुर्गादेवीको । यौन पिपाशुका कारण पन्त परिवारमा कहिल्यै निको नहुने घाउ लाग्यो । सन्तान वियोगको आलो पीडामा कुन चाहीँ बा–आमाको आँसु रोकिन्छ र ! रुदा–रुदा थाकेका उनीहरु काठमाडौं आएर पनि निस्फिक्री रोइरहेका छन् । लाग्छ उनीहरुसँग अब आँसु बाहेक केही छैन ।
आँसुसँगै शब्दमा वर्णन गर्नै नसकिने असीमित आक्रोश छ, यज्ञराज र दुर्गादेवीमा । बलात्कृत भएर निर्मलाले त ज्यान गुमाइन् । तर, हाम्रो प्रहरी, प्रशासन, समाज र सरकार पन्त दम्पक्तिलाई हर क्षणमा मार्न उद्दर छ । र, सर्वश्व गुमाएका यि पनि मर्न डराउन छोडेका छन् अचेल । भन्दैछन्– सरकार न्याय नदिने भए गोली ठोकेर मारिदे ।
निर्मलाको हत्या अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिका र राजनीतिक संरक्षणको सन्देहले अघिल्लो पुस्तालाई पञ्चायतको उत्तरार्धतिर फर्काएको छ । २०३९ सालमा संभवत् निर्मलाकै नियतिमा मारिएका थिए–नमिता–सुमिता भण्डारी । तत्कालिन शक्तिकेन्द्रको कोपभाजनमा परेका भण्डारी दिदी–बहिनीको हत्या रहस्य अझैसम्म पनि खुलेको छैन । भण्डारी परिवारले न्याय नपाएजस्तै पन्त परिवार पनि शक्ति र पहुँचका सामु संधै निरिह बन्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
पुत्री वियोगमा रहेका पन्त दम्पक्तिका लागि हत्यारा चिन्नु र उसले सजाय पाएको सुन्नु-हेर्नु बाहेकको अर्को धोको छैन् । ताकी हजारौं निर्मलाप्रति कुदृष्टि लगाउनेहरु सचेत-सजग रहुन् । तर, परिस्थिति नियोजित रुपमा यस्तो बनाइएको छ कि निर्मलाको हत्या ‘नमिता–सुनिता’कै दोस्रो संस्करणका रुपमा संघै रहस्यमै रहन पनि सक्छ ।